Qeybdiid: Rag shaqo doon ah ayaa isu soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Gobolada Dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Galmudug, Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) oo ah musharrax u taagaan xilka madaxweynaha maamulka la doonayo in loo sameeyo Mudug iyo Galgaduud ayaa sheegay in ragga kale ee ilaa hadda xilkaas isu soo taagay aysan xilligaan ka bixin karin hogaaminka maamulka la dhisi doono.
Cabdi Qeybdiid oo wareysi Radio Muqdisho ayaa sheegay in siyaasiyiinta dhalinyarada ee isu soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Gobollada Dhexe ay yihiin dad soo shaqo doontay, islamarkaana aysan awood u laheyn xilligaan iney ka howlgalaan Mudug iyo Galgaduud.
“Ragga ilaa hadda isi soo sharraxay waa dhalinyaro, wey soo shaqo doonteen, laakiin lama joogo xilligii ay madax ka noqon lahaayeen gobollada dhexe oo dhib badan ka jiro” ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
“Gobollada Dhexe waxaa ka jira dhib badan, waxaana loo baahnyahay inuu madaxweyne u noqdo qof leh khibrad amni, maaha xilligii lagu howlgeli lahaa xafiis qabow iyo gaari qaboojiye leh, marka waxaan is iraahdaa mey sugtaan xilli ay shaqadaan ka bixin karaan oo loo diyaariyey” ayuu sidoo kale yiri Qeybdiid.
Cabdi Qeybdiid ayaa sheegay in booqashadii dhawaan uu ku tegay magaalooyinka Cadaado, Dhuusamareeb, Guriceel, Xeraale iyo deegaano kale uu uga gol lahaa inuu bulshada deegaanadaas la hadlo.
Wuxuu Qeybdiid rajo ka muujiyey inuu ku guuleysan doono xilka madaxweynaha maamulka gobollada Mudug iyo Galgaduud.
Musharraxiinta xilka madaxweynaha maamulka aan weli la dhisn ee Galgaduud iyo Mudug isu soo taagay ayaa waxaa ka mid ah: Agaasimihii hore Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi iyo C/raxmaan Diinaari oo ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyey dalka Koomfruta Sudan.
← Daawo sawirrada: Sida uu u dhacay kulan dhexmaray madaxweyne Xasan & dhigiisa Masar → Somalia: My two cents on mental illness in the Somali community!